नगरपालिकाको नजरमा नपरेको सल्यान दोस्रो गजल महफिल !
लेखकः भरत रोकाय (एक्सन आर.सी.)
२०७५ साल असारमा राप्ती अन्चलमै पहिलो पटक सल्यान श्रीनगरमा पहिलो सल्यान गजल महफिल २०७५ गर्न सफल भएको सल्यान कला साहित्य परिषद् २०७५ फागुनतिर नेपालमै पहिलो पटक ‘जलमा गजल’ नामक बिशेष रचना बाचन सल्यानको कुपिण्डे तालमा ढुङ्गामै कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।
बर्षमा २ ओटासम्म महफिल गर्ने र केहि फुटकर कार्यक्रमहरु गरेर सल्यानलाई साहित्यक तबरले माथि उठाउने मुल आश्रय लिएको सल्यान कला साहित्य परिषद्ले २०७५ चैत तिर सल्यान दास्रो गजल महफिल सल्लीबजारमा गर्ने निर्णय त गरेको थियो तर मिति भने तय गरेको थिएन । समय प्रतिकुल नभएका कारण अर्थात कार्यसमितिका साथिहरुको ब्यस्तताका कारण तत्काल कार्यक्रम गर्न सकेन यसमा सल्यान कला साहित्य परिषद माफि चाहान्छ । तर पनि हामीले २०७६ असार २८ गते कार्यक्रम गयौँ ।
सल्यान दोस्रो गजल महफिल कर्णाली प्रदेशमा पर्ने सल्यानको पनि अझ छायाँ परेको ठाउँ, भौगोलिक दूष्टिकोण बाट हेर्दा निकै बिकट बस्ति वारिपारिबाट पहाडै पहाडको बिचमा भेरि नदि सलल..बगिरहेको भेरिकै किनारमा पर्ने सल्लीबजारमा गर्ने निर्णय परिषद्ले गरेको थियो । मैले छायाँ परेको किन भनिरहेको छु भने सल्लीबजार अत्याधिक सम्भावना बोकेको ठाउँभएता पनि हरेक दूष्टिकोणबाट पछाडि परेको रहेछ । जसको कारण राजनितिक स्थिरता, त्यहाँका मान्छेको मानसिक अबस्था कमजोर देखि लिएर धेरै कारण सल्लीबजार आफै पछाडि परेको रहेछ ।
राजधानि भन्दा बाहिर मोफसल अझ भन्नौ सल्यानमा गजल महफिल यो सुन्दा मिजासिलो लाग्ने बिषय होला तर हामिले कार्यक्रम जसरी नि गर्नु पर्छ । यो ठाउँका प्रतिभाहरु देखि लिएर सल्यानलाई देशैभरी चिनाउनु पर्छ भन्ने अभियानमा निरन्तर लागिरह्यौ । दुरको बस्ति जहाँ साहित्यको ‘स’ पनि राम्रो संग थाहा छैन माहोल कसरी बनाउने, भौतिक र आर्थिक रुपमा कसरी मजबुद हुने बहुत चुनौती थियो ।
हामिले सुरुमा त्यहाँको नगर अर्थात बनगाड कुपिण्डे नगरपालिकाका मेयर श्री गोविन्द कुमार पुनलाई भेट्यौ र हाम्रो कार्यक्रमको कन्सेप्ट सुनायौ । सुरुको दिन उहाँले केहि आशा देखाउनु भयो र भोलिपल्ट ११ बजे नगरपालिकामै आउनु भन्नु भयो । हामि भोलिपल्ट नगरपालिका पुग्यौ तर मेयरसापलाई भेट्न सकीनौ र उपमेयर श्री मन्जु यरीलाई भेटियौँ ।
कार्यक्रम बारेमा उपमेरयसँग फेरि बोल्यौ । उहाँले मेयरलाई भेट्नुहोस भन्नु भो हामि मेयरकै निजि निवासतिर लाग्यौ र उहाँका सल्लाहकार संग भेट्यौ उहाँले धेरै सकारात्मक कुरा गर्नु भयो हामि खुसी भयौँ । उहाँले हाकिमसाप लाई भेट्नुहोस भन्नु भो लगभग साझ ५ बजिसकेको थियो ।
फेरि हामि नगरपालिका लाग्यौ र हामिले त्यहाँ हाकिमसापलाई भेट्न सकिनौ नगरपालिका बाटै उहाँको नम्बर मागेर हामिले फोन गर्यौ र कार्यक्रम बारेमा भन्निउ तर उहाँले नगरबाट तपाईहरुलाई कुनै सहयोग हुन सक्दैन भन्नुभयो । त्यसपछि हामिलाई धेरै दुःख लाग्यो । त्यो समय २ दिन सम्म वारिवारि गर्यौँ । केहि सहयोग होला भनेर तर केहि पनि भएन ।
हामिलाई बहुत दुख लाग्यो । म बहुत भावुक भएको पनि थिए । शरिरभरी पसिनै पसिना । म भुल्न सक्दिन जिन्दगिको त्यो पल जब कि कार्यक्रम को प्रमुख अथिति नगरप्रमुख नै हुनुहुन्छ ।
हामिले फोन गरेर मेयरसापलाई १ महिना अगाडि नै यस्तो खालको एउटा साहित्यक कार्यक्रम तपाईकै नगरमा गर्दै छौ सर केहि आर्थिक र भौतिक सहयोग गर्नु पर्यो भनेर भनेका थियौँ । र उहाँले २, ४ दिन अगाडि आउनु बसेर कुरा गरौला भन्नु भएको थियो र हामि त्यसै अनुसार २, ४ दिन अगाडि नै सल्लीबजार पुगेका थियौ । तर भैदियो बिल्कुल सोचे भन्दा फरक तर पनि हामि थाकेनौ जसरी नि महफिल सम्पन्न गर्ने बाटोतिर लाग्यौ …
त्यसपछि हामीले सभाहलको लागि सल्लीबजारकै प्रभेट बोडिङ स्कुल लङग्रिन इङलिस बोर्डिङ स्कुललाई अनुरोध गर्यौ । र लङग्रिन इङलिस बोर्डिङ स्कुलका सन्चालक तथा ब्यवस्थापक आदर्निय सर शिव ओलीबाट हामिलाई सभाहल र केहि भौतिक समानहरुको र यातायातको सहयोग गर्ने प्रतिबद्दता गर्नुभयो ।
त्यस्तै सल्लीबजारमै रहेका २ ओटा होटेल सम्मान होटेल र शंकर होटेलले वाहिरबाट आउने १० जना जति अतिथीहरुलाई २ छाक खाना र बस्नेको ब्यबस्था गर्दिने कुरा भयो । स्टेजको लागि सन्जिव टेण्डा हावस सल्लीबजारबाट हामिलाई टेण्डाको सहयोग भयो ।
अब हामि कमजोर हैन बलियो हुदै गयौँ । २७ गते साझँ हामिले बिभिन्न बाहिरी जिल्लाबाट आउनु हुने करिब ३०÷३५ जना जति साहित्य अनुरागि मनहरु लगायत सम्मानित हुने ब्यक्तित्व डा.पुर्ण भण्डारि पकंज बाहेक अरु ३ जना र महफिलका मुख्य आकर्षक ४ जना गजलकारहरु लाई स्वागत गर्यौ र होटेल राप्तिमा गजल साझँ पनि गर्यौ ।
पुर्ण भण्डारि पकंज लगायत जिल्लाका बिभिन्न बुद्दिजिवि, प्रत्रकार र हाम्रा केहि सुभ चिन्तक साथिहरु भोलिपल्ट अर्थात २८ गते बिहान आउने कुरा थियो र उहाँहरु भोलिपल्ट घरबाट हिड्नु त भयो तर कार्यक्रम स्थलसम्म आउन सक्नुभएन । कारण थियो कुपिण्डे ताल देखि माथि ज्यामिरे भन्ने ठाउँमा भयाङकर ठुलो पहिरो गयो । र सडक अबरुद्व हुँदा उहाँहरु बिचबाटै फर्किनुपर्ने अवस्था आयो । यसमा हामि दुखी थियौ । र हाम्रो टिमको तर्फबाट माफि पनि चाहान्छौ बर्खायामको कार्यक्रम यस्तै भयो ।
२८ गते बिहान एकतमासले हावाहुरी, पानी, सबै संगै आयो हामी धेरै हत्तोसाहित भयौ । कार्यक्रमलाई नै अबरुद्ध गर्छ कि जस्तो गरिरहेको थियो । तर पनि हामि कत्ति पछि हटिनौ निरन्तर लाग्यौ सल्लीबजारका विभिन्न संघसंस्था, बजार ब्यबस्थापक लगायत सबै सबैलाई हामीले चिठि पठाएका थियौ ।
जहाँसम्म लाग्छ केहि आउनु पनि भएको थियो । प्रमुख अथिति मेयरसाप नै कार्यक्रम नआईरहदा हामिलाई नमज्जा त लागिरहेको थियौ नै तर पनि हामि त्यहाँ निर नै अट्किन भने पक्कै सक्दैन थियौँ । हामिले कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ ।
बिशिष्ट अथितिको रुपमा त्यही स्कुलकै ब्यबस्थापक अर्थात हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य प्रयोजक आदर्निय सर शिव ओलीलाई बिशिष्ट अथिति राखेर कार्यक्रम लाई अगाडि बढायौ । खै कहाँ सम्म गर्न सकिउ धेरै चुनौति त थिए नै तर पनि कार्यक्रम गज्जव भएको महसुस हामिले गरेका छौ ।
उक्त कार्यक्रममा सल्यानलाई साहित्यक क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने ३ जना बरिष्ठ साहित्यकारहरु डा.कूष्णराज डि.सि, डा.पुर्ण भण्डारी पकंज र दिपक शर्मा ‘समिर’ लाई सम्मान गरेका थियौ , जसमा डा.पुर्ण भण्डारी पकंज अनुपस्थित हुनुहुन्यो भने एकजना जिल्लाबाहिरका अर्थात जयगौरी पब्लिकेसनका आदर्निय गुरु दामोदर ढकाल ‘दिपक’ लाई सम्मान गरेका थियौ ।
देशकै चार जना बरिष्ठ गजलकारहरु रमेश चन्द कुसुम, कूष्ण बिरही, वसन्त ओली वसन्ति, झलक ओली र स्थानिय स्तरका प्रतिभाहरुलाई पनि समेटेका थियौ । प्रत्येक गजलिय शेरहरुले माहोल बहुत तातिएको थियो । करिब १५० देखि २०० जना सम्मको सहभागिता रहेको उक्त कार्यक्रमको सन्चालक सल्यान कला साहित्य परिषदका संयोजक लोकेश जलनले गर्नुभयो ।
जसको सभाअध्यक्ष म आफै थिए । स्थानिय सरकार अर्थात नगरले यस्तो खालको साहित्य कार्यक्रमलाई सहयोग नगर्दा म लगाएत हामी आयोजक सबै दुखि भयौँ । मैले यो कुरा कार्यक्रममा पनि भनेको थिए । अब बन्दुकको अगाडि कलमले चुनौति दिने छ । कलम र साहित्यलाई कमजोर नसोच्न पनि मेरो अनुरोध छ ।
अन्त्यमा कार्यक्रममा उपस्थित र प्रकृतिका बाबजुद आउन प्रयास गरेपनि सफल हुन नसक्नु भएका, कार्यक्रमका मुख्य प्रयोजक सहप्रयोजक सबैलाई बिषेश धन्यवाद दिन चाहान्छौँ । हामी थाक्नेवाला हैनौँ । निभ्नेवाला पनि हैनौँ ।
यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहने छ, बढाइ रहनेछौँ । सम्मानित हुने ब्यक्तित्व सबैलाई बधाई मछ । महफिलका बिशेष आकर्षक गजलकारहरु लाई बिशेष सम्झना ।
खै कहाँ सम्म गर्न सकियो ?बाकिँ मुल्यानकण तपाईहरु कै हातमा छोड्न चाहान्छौ ? धन्यवाद !
लेखक सल्यान कला साहित्य परिषद्का अध्यक्ष हुन् ।
प्रकाशित मिती २०७६ असार ३० गते
यो पनिः दोस्रो सल्यान गजल महफिल सम्पन्न